सबै मानिसलाई प्रायः खाना खाएपछि किन निद्राले झपझप हुन्छ ? किन लाग्छ खाना खाएपछि निद्रा ?
हरेक मानिसहरुको एउटा न एउटा आदत/बानि हुन्छ । त्यस्तै मानिको प्राय:जसो खानापछि एकछिन आराम/सुत्ने बानि हुन्छ । मानिसलाई खाना खाएपछि झपझप निद्राले सताउने गर्छ । तर बेलुकासमेत खानेबित्तिकै नसुत्न डाक्टरले सल्लाह दिने गर्छन् । जसले गर्दा पाचन प्रक्रियामा समस्या सिर्जना हुने गर्छ । खानालगत्तै निद्रा लाग्ने कारणबारे भने निकै कमलाई जानकारी हुन सक्छ । त्यसैले खानालगत्तै निद्रा लाग्ने हुन्छ ।
खानालगत्तै निद्रा नलाग्न पनि सक्छ । तर प्राय: सबैलाई खाना खाएपछि निद्रा लाग्ने गर्छ । यसका थुप्रै कारण छन् ।
अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट पाइने खानाको प्रयोगपछि शरीरमा इन्सुलिन बन्न थाल्छ । र यसले ट्रिप्टोफेननको निर्माण गर्छ । यो मस्तिष्कमा पुगेपछि सेरोटोनिन बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र मेलाटोनिनका कारण मानिसलाई निद्रा लाग्ने गर्छ ।
एक्सपर्टहरू भन्ने गर्छन् यसबाट बच्न खानाको खाने तरिका बारे राम्रो जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ । यसबाट बच्न खानाको मात्रामा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ । एकैपटक ठूलो परिमाणमा खाना खानुको सट्टा थोरैथोरै खाना छोटो–छोटो अवधिमा प्रयोग गर्दा निकै राम्रो हुन्छ । r
मुटुरोगले लिन्छ ज्यान, यी ७ तरिका अपनाई आजैदेखि आफ्नो मुटु बचाउनुहोस
पेटको बोसो घरेलु उपायद्वारा यसरी घटाउनुस